Masjid ku yaalla dalka Hindiya oo aanu imanin hal qof oo Muslim ah (Yaa ka addima?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Masjid ku yaalla dalka Hindiya oo aanu imanin hal qof oo Muslim...
Masjid ku yaalla dalka Hindiya oo aanu imanin hal qof oo Muslim ah (Yaa ka addima?)
(Bihar) 02 Nof 2019 – Xilli ay Hindiya kusii kordhayaan weerarrada Islaam nacaybka ah iyo qaybsanka bulshada, misna xaafad ku taalla gobolka Bihar, gaar ahaan degmada Nalanda ayaa samaysay arrin naadir ah oo muujinaysa niyad furnaan.
Xaafadda Maadhi wax Muslimiin ihi ma deggana, balse waxaa misna ku yaalla masjid 200-sano jir ah, kaasoo maalintii 5 jeer laga daaro addinka salaadda, isla markaana ay dayactiraan dadka Hindu-ga ah ee halkaa ku badan.
“Annagu (Hindu ahaan) ma naqaanno ‘Aadaanka’, balse waxaan adeegsannaa memory card (uu ku duuban yahay Aadaanku) oo aannu daarno 5 jeer maalintii,” ayuu yiri Hans Kumar, oo xaafadda deggan.
Sida ay sheegeen dadka xaafadda Maadhi, waxaa halkaa degannaan jirey Muslimiin xoogaa ah, balse si tartiib tartiib ah ayay uga guureen, lamana sheegin sababta.
“Ma jirin qof masjidka daryeeli lahaa, marka Hinduuga ayaa howshii la wareegey,” ayuu yiri Gautam, oo ka mid ah dadka masjidka daryeela.
Gautam ayaa sheegay in aanay kaliya ku ekaanin daryeelka, balse ay masjidka barakaystaan oo ay waxyaabo ay falxad u arkaan ugu yaboohaan. Janki Pandit oo ah Kuhaan Hinduu ah ayaa isagu sheegay inay xitaa masjidka yimaadaan oo ku dhex ducaystaan markasta oo ay dhib la kulmaan.
Previous articleGOOGOOSKA: Bologna vs Inter Milan 1-2 (Inter oo hoggaanka qabatay)
Next article”Xal aan xabbad ahayn halla keeno!” – Mahad Salaad oo talo u jeediyey Xukuumadda & kooxda Ahlu Sunna